Kenya: Misaotra an’i Annan sy ny ekipa fa hilamina ny firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Mey 2019 4:45 GMT
Taorian'ny nanambaràna ny fifanarahanal, nafana fo be ny mpiantso iray tao amin'ny onjam-peo eo an-toerana ary nanasa an'i Kofi Annan sy ekipany mba “nyama choma” (hanao kitonotono hena), mpiantso iray hafa nanolotra labiera roa ho azy ary iray hafa nanambara fa anjely tsara indrindra nirahin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka any Kenya i Annan.
Nampiseho ny tahan'ny fientanam-po teny an-dalamben'i Nairobi sy Kisumu fa tapitra ny zava-dratsy indrindra, ary mety tsy hihemotra tahaka ny tao anatin'ny roa volana farany i Kenya.
Vita ihany ny fifanarahana, hanery ny fanitsiana ny lalampanorenana saingy tamin'ny farany, dia fantatry ny Keniana fa eo an-tanan'izy ireo ny momba azy ireo. Fanombohana vaovao ho an'ny firenena izay voavonjy tamin'ny tsy fanarahana ny dian'ireo firenena tsy nahomby tany Afrika izany.
Resahana ao amin'ireo tanàna lehibe ny antsipirian'ilay fifanarahana sy ny “ambadiky ny sehatra”. Nanoritsoritra sary mitovy ihany koa ny tontolon'ny blaogy Kenyana.
Rehefa nipoaka ny vaovao, nanoratra “fisaorana” ho an'i Kofi Annan sy ny ekipany i Lovely money:
Amin'ny anaran'ny Kenyana be fanantenana, te-hisaotra am-pahatsorana anao aho noho ny ezaka mafy sy ny faharetana nasehonao. Ny farany fa tsy ny kely indrindra, tsy azo tsinotsinoavina ny ezaka maharitra nataon'i Graca Michel sy Benjamin Mkapa
LostwhiteKenyan nahatsapa fa tahaka ny fanomezana taombaovao ny fivoarana politika ary nanapa-kevitra hampiseho ny hafaliana sy ny dihy antserasera:
Ho fankalazana ity andro mahafinaritra izay nandraisan'ireo mpitarika fanapahan-kevitra hamerina fandriampahalemana ao Kenya ity, faly tanteraka aho afaka mitondra aminao ny fandaharana fialam-boly feno ho ankafizinao mba hanampy anao hanatevin-dahanara ny fety……..Hatombotsika amin'ny dihy kely avy aminao
Political articles nanatri-maso ny fitsinjahana tao Kenya:
Nankalaza izany tao Kisumu, Kenya ireo mpanohana ny antokon'Atoa Odinga, Hetsika Demaokratika Volomboasary taorian'ny fanaovana sonia. Tanteraka ny fifanarahana rehefa nifampiraharaha mivantana tamin'Atoa Kibaki sy Atoa Odinga i Kofi Annan, sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana teo aloha.
Manome hevitra amin'ny fomba niainan'ny olona tamin'ny fiatoana vokatry ny herisetra sy ny fihisatry ny fifampiresahana taoriana ny lahatsoratr'i Kumekucha.
Tahaka ny hoe ny firenena manontolo no nitsahatra tsy niaina hatramin'ny 30 Desambra 2007 ary nanomboka niaina indray ny rehetra ora vitsy lasa izay rehefa nambara ihany nony farany ny vaovao tsara momba ny fifampiresahana fandriampahalemana Anan.
“Manana fifanarahana isika,” hoy i Anan mampiseho fitebitebena sy fangitangitahan'ny fotoana.
Voamarika tany amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena ny fankalazana lehibe, anisan'izany ny faritra tahaka an'i Migori araka ny tatitry ny lehilahy iray teny ifotony fa fa mifalihavanja ny Kenyana. Raha nanoratra ity aho, dia mbola tsy nahazo ny fihetseham-po avy any amin'ny Lemak'i Rift. Tsy misy ny tatitra momba ny fankalazana any, farafaharatsiny hatramin'izao.
Ho an'i Wheremadnessresides, fotoana izao mba hifampirariana “taona vaovao” satria ho fotoana hidirana amin'ny anton-draharaha mahazatra ho an'ny Kenyana marobe:
Mifampiarahaba Taona vaovao ny rehetra aty amin'ny misy ahy.
Mifalia Taombaovao. Androany no manomboka ho antsika ny taona 2008.
Namaky ny lahatsoratr'i Oyunga Pala aho hoe nanambara ny Dr Frank Njenga, izay angamba mpitsabo areti-tsaina malaza indrindra eto Kenya fa iray amin'ireo soritry ny ratran-tsaina taorian'ny fifidianana ny“tsy afaka mijanona amin'ny firesahana politika’.
Nairobiana iray nanatri-maso firavoravoana ary manana fitakiana amin'ny media iraisam-pirenena mba hampitombo ny fitantaran'izy ireo:
Niarahaba an'i Kenya manontolo ny fankalazana mampifalifaly noho ity fivoarana vao haingana izay hamarana ny ady sy ny herisetra naharitra roa volana ity.
Manantena indrindra aho fa hampiseho izany vaovao mahafaly izany mandritra ny 15 minitra ireo fampitam-baovao iraisam-pirenena tahaka ny Al Jazeera, CNN, BBC, SkyY News mba hanasongadinana fa tsy momba ny antsy kalaza fotsiny ny Kenyana fa momba ny fisiana miaraka, ny fikirizana, ny faharetana, ny fifanarahana, ny fandriampahalemana, ny fitiavana ary ny firaisankina. Aza mivarotra ny ratsy fotsiny!
Noho ny fifanarahana tratra, dia fotoana izao hanasitranana ireo ratra sy hanomboka ny dingana fanarenana.